သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve, Submerged Electromagnetic Pulse Valve,2လက်မ Pulse Solenoid Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve,နစ်မြုပ် Electromagnetic Pulse Valve,2 လက်မ Pulse Solenoid Valve,rectangular Pulse Solenoid Valve,,
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve,နစ်မြုပ် Electromagnetic Pulse Valve,2 လက်မ Pulse Solenoid Valve,rectangular Pulse Solenoid Valve,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve
သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve, နစ်မြုပ် Electromagnetic Pulse Valve ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ,2လက်မ Pulse Solenoid Valve R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve ပေးသွင်း
အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း signal ကို wire ကိုမှတဆင့် solenoid valve ၏ကွိုင်သို့ input ကိုဖြစ်ပြီး, သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ဟာသွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုတူရိယာ၏ output signal ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ယင်းအဆို့ရှင်၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျော၏နှစ်ခုဓာတ်ငွေ့အခန်းများ၏ဖိအားအပြောင်းအလဲရော်ဘာမြှေး၏ပုံပျက်သောပွင့်လင်းအောင်နှင့်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရော်ဘာမြှေး၏အချင်းရော်ဘာမြှေး၏အရွယ်အစားနှင့်အဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲ၏အမြန်နှုန်းဆုံးဖြတ်သည်။ အဆိုပါမြှေး၏အချင်းသည်ပိုမိုကြီးမားသည့်လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ထိုးစွမ်းဆောင်ရည်အဆိုပါပိုကြီးတဲ့။
အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာကိုလည်းမြှေးအဆို့ရှင် 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဒါဟာဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်သွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏မှုတ်မှုစနစ်အတွက်ချုံ့ဝေဟင်၏ "switch ကို" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုတူရိယာ၏ output signal ကိုထိန်းချုပ်ထား, နှင့်ကိုင်တွယ်စွမ်းရည်သေချာစေရန်သကဲ့သို့မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ခုခံခြင်း, set ကိုအကွာအဝေးအတွင်းထားရှိမည်ကြောင်းသို့မှသာယင်း filter ကိုအိတ် (အခန်းတစ်ခန်း) တွင်ဖုန်မှုန့်မှုတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပါတယ် ဖုန်မှုန့်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ထိရောက်မှုစုဆောင်း။
အဆိုပါ solenoid valve ၏ကွိုင် wire ကိုမှတဆင့်ရှေ့ကိုသွေးခုန်နှုန်း signal ကိုသို့ input ကိုဖြစ်ပြီး, ကွိုင်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်လုပ် flux ရွေ့လျား core ကိုအတွက်ဆွဲထုတ်နှင့်အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါရှေ့ဆက်သွေးခုန်နှုန်း signal ကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါထိုရွေ့လျား core ကိုဖြန့်ချိသည်, ထိုရွေ့လျား core ကိုနွေဦးအင်အားစု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်မှာကနဦးပြည်နယ်မှပြန်လာသောသည်နှင့်အဆို့ရှင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင်းပနိုင်ရန်၏ပုံစံအတွက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီးထိုသို့ပြီးနောက်ထားရှိမည်နိုင်ပါသည် ရှေ့ဆက်သွေးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်အာဏာကိုချိုးသဖြင့်, အနုတ်လက္ခဏာသွေးခုန်နှုန်း signal ကို reset ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ၏နိယာမလျှပ်စစ်ယန္တရား၏သွေးခုန်နှုန်းကိုသုံးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အရှိန်အဟုန်ဖြစ်လာသည့် pulsating ဓာတ်ငွေ့ခိုင်ခံ့သောစွမ်းအင်ကိုမှန်ကန်စေသည်သောစက်မှု pulsation, အသွင်ပြောင်းနှင့်အချိန်တိုအတွင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အင်အားကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း၏ကြားကာလဟာ rated ဓါတ်ငွေ့ဖိအား, အယ်လ်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားခံရဖို့ PLC ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ယင်းထုတ်လွှင့်အလိုအလျှောက်ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်လျှော့ချသောအခါများသောအားဖြင့်အဓိကရေနံလမ်းဒါမှမဟုတ်ထိတ်လန့်ကိုစုပ်ယူပြန်ဖိအားရေနံလမ်းထဲမှာ installed, ရေနံဖိအားကျဆင်းသွားခြင်းသို့မဟုတ်အခါသော့ခတ် stop နဲ့သော့ခတ်ရပ်နားအပြောင်းအလဲလျှော့ချနှင့်သော့ခတ်နိုင်ဖို့အတွက်စတင်နေကြသည် သက်ရောက်မှုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ယာဉ်ပြေးပိုပြီးမျှမျှတတပါစေ။
၎င်း၏ function ကိုရေနံလမ်းအတွက်ရေနံဖိအားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ဒါဟာရေနံလမ်း၌ပါသောဆီဖိအား၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စစ်ဆင်ရေးတည်ငြိမ်ထားရှိမည်ကြောင်းဒါပြောင်းကုန်ပြီနှင့်သော့ခတ်, သော့မခတ်ဖြစ်သည့်အခါရေနံဖိအားထိတ်လန့်မှုကိုလျှော့ချဖို့အဓိကရေနံလမ်းဒါမှမဟုတ်ထိတ်လန့်ကိုစုပ်ယူ၏နောက်ကျောဖိအားရေနံလမ်းထဲမှာ installed ဖြစ်ပါတယ်။
1. ညာဘက်ထောင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်: အမြှေးအဆို့ရှင်ကိုတိုက်ရိုက်အဆို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်၏ညာဘက်ထောင့်မှာလျှပ်စစ်အချက်ပြကထိန်းချုပ်ထားသည်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်မှတဆင့် 2. ဖြောင့်: မြှေးအဆို့ရှင်ကိုတိုက်ရိုက်အဆို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်၏ 180 ဒီဂရီမှာလျှပ်စစ်အချက်ပြကထိန်းချုပ်ထားသည်။
တိုက်ရိုက်အဆို့ရှင်ဝင်ပေါက်များကနစ်မြုပ်နေသည်နှင့်တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်အချက်ပြခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်သောအမြှေးအဆို့ရှင်: 3. လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်နစ်မြုပ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve , နစ်မြုပ် Electromagnetic Pulse Valve ,2လက်မ Pulse Solenoid Valve , rectangular Pulse Solenoid Valve , သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve မြှေး